Boqolkiiba boqol waxqabad caafimaad leh: muusikada aad jeceshahay inaad dhaansato | Ragga Stylish
Ku dheefaha lagu daro qoob ka ciyaarka. Dhanka bulshada, shucuurta iyo xitaa heerka jir ahaaneed.
Haddii jawaabta su’aasha hore ay taa tahay waxaad jeceshahay qoob ka ciyaarka, waad ka heshay mid ka mid ah raaxada nolosha. Qoob-ka-ciyaarka, kaligaa, laba-labo ama koox koox, waxaa jira laxanka dhadhanka oo dhan. Laga soo bilaabo tan caadiga ah illaa tan ugu tijaabada iyo geesinimada.
Xitaa waa la sheegi karaa taas waxaa jira nooc ka mid ah muusikada iyo qoob ka ciyaarka koox kasta oo dad ah.
1 Laxanka guriga
2 Laxanka muusigga
3 Muusikada Disco
4 Ma jeceshahay inaad dheesho Reggaetón?
Flamenco ayaa caan ka ah Spain; sidoo kale ka baxsan xuduudaha qaranka, muddada Qoob ka ciyaarka Isbaanishka.
Qawaaniinta kale ee Isbaanishka, oo aad caan u ah tan iyo qarnigii XNUMXaad, inkasta oo ay hadda u badbaado sidii "qayb matxaf ah" daadadka ganacsiga awgood, ayaa ah laba-tallaabo.
Xilligii guud iyo caalamku wuxuu dadweynaha u keenay dhammaan noocyada muusikada, taasoo muujisay koror weyn oo ku saabsan qoob ka ciyaarka qoob-ka-ciyaarka. Ikhtiyaarradu waxay ka bilaabmaan dhagaxa ugu culus. In kasta oo ay jiraan kuwo shaki ka qaba arrintaas, tan Waa mid ka mid ah "cayaaraha kooxeed" ee adduunka sida weyn looga dhaqmo; tanina iyadoo ay jirto xaqiiqda ah in tallaabooyinkoodu ay ku kooban yihiin boodbood aan hagaagsanayn, oo aan lahayn amarro muuqda.
Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa noocyada kale sida Ska iyo xitaa dhinacyada qaarkood ee reggae. Halka muusigga loo yaqaan pop, ee Michael Jackson ilaa maanta, waa saxaro nadiif ah. Wiilasha Backstreet, Justin Bieber y BrunoMars; Kuwani waa tallaabooyin si wanaagsan loo soo baray, sidaa darteed qoob-ka-ciyaarka uma muuqdo mid la hagaajiyay.
Laakiin kahor Michael Jackson, Justin Timberlake ama Justin Bieber, Muusikada diskooga horay ayey u sameysay waxkeeda; oo wuxuu kaga tagayaa guuto raacsan. Inbadan maanta waxay sii wadaan inay ku daydaan raadadkii John Travolta en Qandho habeenkii Sabtida.
Ma jeceshahay inaad dheesho Reggaetón?
Laxanka Kariibiyaanka ayaa ah mid heer sare lagu ciyaari karo. Marka lagu daro reggaeton, xulashooyinka waxay maraan salsa iyo meringue. Waxaa jira kuwa kale, sida "el danzón" iyo el son cubano, marka lagu daro cumbia-ka Colombia iyo Calypso. Kuwa ugu jacaylka badan, ama kuwa ku jira qorshaha qabsashada, qoob ka ciyaarka bolero "Jirka ilaa Jirka" waa qorshe ku dhowaad aan qaldaneyn. Hubaal, intaad taqaanno sida loo ciyaaro.
Ilaha Sawirka: TravelJet / Frames
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Waa maxay muusikada aad jeceshahay inaad ku ciyaarto
Sidee loo joojiyaa khamriga?